Tsara vidy sy MPA mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanatrarana ny fampiasana maharitra ny harena an-dranomasina amin'ny ambaratonga maro.​ ref Mihamaro tokoa ny tambazotra marefo amin'ny MPA dia ampiharina mba hampitombo ny tombontsoa amin'ny fiarovana amin'ny sehatra marobe ary hampiely ny loza ateraky ny fahaverezan'ny biodiversité any amin'ny faritra iray. Ny fanalefahana ny MPA ho an'ny tambazotra MPA dia ahafahana miaro ny karazana sy ny toeram-ponenana ankoatra ny fikojakojana ny tontolo iainana, ny rafitra ary ny asa.
Ity fizarana ity dia mampahafantatra ireo mpitantana ny haran-dranomasina amin'ireo fitsipika fototra momba ny faharetana sy ny tolo-kevitra hanohanana ny fampandrosoana ny mahazaka. tambajotra MPA. Ireo fitsipika ireo dia afaka manampy ny tambajotran'ny MPA hahatratra tanjona maro, ao anatin'izany ny faharetan'ny jono, ny fiarovana ny zavamananaina ary ny faharetan'ny tontolo iainana manoloana ny fiovan'ny toetr'andro sy ny loza hafa. Ireo fitsipika sy tolo-kevitra ireo dia azo ampiharina amin'ny MPA efa misy na ampiasaina amin'ny fandrafetana ny tambajotra MPA ho avy ary azo ampiharina amin'ny ambaratonga rehetra. Ny fampidirana ireo tolo-kevitra ireo dia manome ny vintana tsara indrindra ahafahan'ny vatohara ao anatin'ny MPA ho tafavoaka velona amin'ny korontana ary hanohy hanome entana sy serivisy ilaina ho an'ny vondrom-piarahamonina.
Ny fitsipiky ny famolavolana MPA miorim-paka dia manome torolàlana momba ny fomba famolavolana tambajotra MPA na MPA maharitra. Ny fitsipika biofizika sy ara-tsosialy ara-toekarena dia matetika ampiasaina hampahafantarana ny famolavolana sy ny fitantanana MPA. Ny fitsipiky ny biophysika dia mikendry ny hanatratra tanjona biolojika amin'ny alàlan'ny fiheverana ny fizotran'ny biolojika sy ara-batana; fa ny foto-kevitra ara-tsosialy sy ara-toekarena dia mikendry ny hampitombo ny tombontsoa sy ny fampihenana ny fandaniana ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana sy ny indostria maharitra.
Amporisihina ny mpitantana ny hampihatra ny fitsipiky ny faharetana amin'ny fomba feno araka izay tratra ary hanao laharam-pahamehana ny fandrarana ny hetsika manimba sy ny fiparitahan'ny risika amin'ny alalan'ny fanehoana sy famerenana ireo karazana toeram-ponenana. Toro-hevitra momba ny habe sy ny halavany ny MPAs ary miaro ireo faritra manan-tantara Azo ampiasaina amin'ny fampahalalana kely kokoa matetika.
Matetika dia misy ny banga momba ny fampahalalam-baovao, ary ny antony ara-kolontsaina sy ara-politika izay manakana ny fampiharana tanteraka ny tolo-kevitry ny famolavolana rehetra. Na izany aza, ny fampiharana ireo fitsipika azo tanterahina ireo dia mampitombo ny mety ho fiarovana ny fonenan'ny karazam-biby tsy fantatra, sy ny dingana manan-danja; ary noho izany, manohana ny faharetana ho setrin'ny korontana.
Kitiho ny sary raha te hijery.
Tolo-kevitra famolavolana manokana avy amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandrafetana tambajotran'ny faritra arovana an-dranomasina mba hanatrarana ny tanjon'ny jono, ny zavamananaina ary ny fiovan'ny toetr'andro ao amin'ny tontolo iainana tropikaly: Torolàlana ho an'ny mpitsabo.manokatra fisie PDF dia hita ao amin'ny fizarana manaraka. Ity toro-lalana ity dia manome andiana fitsipika biofizika mitambatra mba hanampiana ireo mpitsabo hamolavola tambajotran'ireo faritra arovana an-dranomasina mahazaka mba hanatratrarana tanjona toy ny faharetan'ny jono, ny fiarovana ny zavamananaina ary ny faharetan'ny tontolo iainana manoloana ny fiovan'ny toetr'andro.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoLoharano avy amin'ny Vondrona miasa an'ny Coral Triangle Initiative momba ny MPA
Coral Reef Resilience Online Course Lesona 6: Paikady fitantanana ho an'ny faharetana